Jawaari: Xitaa sarkaal kormeer ah kama imaan karo Sierra Leone – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya warqad rasmi ah gaarsiiyey Midowga Afrika, taasoo ay ku diidan tahay in ciidamo ka socda dowladda Sierra Leone la keeno dalka si ay u badelaan kuwa hadda shaqeeya ee jooga Jubada Hoose.
Jawaari ayaa sheegay in isagoo ah ku simaha madaxweynaha Soomaaliya oo markaas dalka ka maqnaa ay Midowga Afrika kasoo gaartay warqad dowladda Soomaaliya looga codsanayo iney iney aqbasho in kala badel loo sameeyo ciidamada dalka Sierra Leone oo ka mid ah dalalka uu aafgeeyey cudurka dilaaga ah ee Ebola.
“Arrinta kala badelka lagu sameynayo ciidanka Sierra Leone waxaa codsigeedu yimid anigoo ah ku simaha madaxweynaha, waxaana arrintaa ugu yeeray wasiiradii ku shaqada leh iyo taliyaasha ciidamada, waxaana go’aan ku gaarnay inaan ciidankaas loo golaanin kala badel” ayauu yiri Prof. Jawaari.
Prof. Jawaari oo sii hadlaya ayaa xusay in xitaa dowladda Soomaaliya diiday in saraakiil kormeer ah oo ka socota Sierra Leone ay yimaadaan Soomaaliya.
“Xitaa waxaan raacsiinay kormeerna looguma imaan karo kuwa meesha jooga oo saraakiil kormeer ah ma imaan karaan, warqadii wey gaartay Midowga Afrika, haddey rabaan kuwaan iney baxaana wey u madax banaanyihiin iney ceshtaan” ayuu yiri Jawaari.
Mar uu ka hadlay Jawaari wax ka dhalan kara go’aanka adage e dowladda Soomaaliya ka qaadatay ciidamada Sierra Leone ayuu yiri “Saraakiisha waxaan ku wargeliyey haddii ciidamadaas loo yeero in aagooda lagu badelo ciidamo Soomaali ah”.
Dalka Sierra Leone oo ciidamo ka joogaan gobolka Jubada Hoose ayaa ka mid noqday dalalka galbeedka Afrika ee ku baahay cudurka halista ah ee Ebola, waxaana warar soo baxay sheegeen in cudurkaas laga helay askari ka mid ahaa ciidamada dalkaas usoo diri lahaa Soomaaliya.
Maamulka Juba oo soo bandhigay qof ay dileen iyo afar maxaabiis ah